Isitolo esidayisa yonke impahla High-technical air purifier lamp hood 833 Umkhiqizi nomhlinzeki | I-ARCAIR
Umklamo oyingqayizivele nowemfashini wesibani ukhanga amehlo akho lapho uwubona kuqala. Le hood yesibani efakwe amandla amakhulu e-DC motor kanye ne-fan ye-centrifugal inikeza amandla wokudonsa aqinile, umsindo ophansi, isihlungi segrisi esingeyona induku, isusa intuthu enkulu nephunga lokupheka kusuka ku-kitch kalula.
Isilawuli sokuthinta sihle, umoya wokunethezeka, uletha umuzwa wobuhle.
Ukusebenza okulula kwejubane oku-3 okwenzelwe izinhlobo zokupheka ezahlukahlukene, gcina ikhishi lakho lihle futhi liphephile ukujabulela isikhathi sokupheka somndeni wakho. I-fucntion ekhetheke ngokwengeziwe yale hood: Isilawuli kude vumela ukuphathwa kwakho kokupheka kube lula ukukulawula noma kukude nje. I-WiFi yenza impilo yakho yokupheka ibe samrt eyengeziwe ukuthi ukwazi ukuvula i-hood nokukhanyisa ngocingo lwakho ngaphambi kokufika ekhaya. Lapho-ke umoya ungaba muhle ngokwengeziwe lapho ufika futhi ukukhanya okufudumele ekhishini kukwamukela ekhaya.
Isihlungi sePlasma sobuchwepheshe obuphezulu esingenawo umsebenzi wokuhlunga kwamalahle kuphela kodwa esingasusa izinhlanganisela ezincane zekhabhoni ezinjenge-molecule yephunga. Uvikelwe ngokuphepha kumagciwane, amagciwane, izinhlamvu nokusabalala kwazo.
Ama-molecule, njengamagciwane nephunga, ahlehliswa ezingeni lamangqamuzana. I-electrode ye-plasma ikhiqiza okuphuma ku-oxygen, okufana ne-ozone, okudingeka ukwelapha ama-molecule. Uthola umoya ohlanzekile - i-oxygen, umswakama ne-CO2.
Inobungani emvelweni, isebenza kahle futhi isiza ukonga ugesi: i-aerodynamics yangaphakathi yenzelwe ukubenza bathule.
Isibani sesibani silenga ophahleni ngentambo yensimbi engavimbani (ukuphakama okulungisekayo ngokuya ngobude bophahla); Le hood yesibani isetshenziswa kuphela kwisitayela sokubuyiswa okufanele kube nesihlungi sekhabhoni noma se-plasma.
Amandla Okonga Amandla
Ipaneli ye-8W ye-LED enesivinini esincane efiphele, ingalungisa ukukhanya okuhlukile njengoba udinga, ikukhanyisela kahle indawo yokusebenzela ngesikhathi sokupheka kwakho futhi ingaba njengokukhanya ebumnyameni ngomklamo wayo omuhle.
Isibani sesibani sisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme futhi senziwa ngomklamo ohlanjululwe, singasetshenziswa njengesibani sophahla.
Langaphambilini I-High End T-Shape Full LED Panel Island hood 810
I-Brass Cooker Hood
Isihlungi se-Cooker Hood Aluminium
Isihlungi se-Cooker Hood Baffle
Isihlungi se-Cooker Hood Carbon
Isihlungi se-Cooker Hood Grease
ICream Cooker Hood
I-Duct Cook Hood
I-Ductless Cooker Hood
I-Glass Cooker Hood
IGlod Cooker Hood
I-Induktionskochfeld Mit Dunstabzug
I-Led Lighting Cooker Hood
I-Modern Range Hood
Xhuma i-Cooker Hood
Isiliva Cooker Hood
I-White Cooker Hood
Ukuhamba komoya: 750 m³ / h
Uhlobo Lwezimoto: 1x210W
Uhlobo Lokulawula: Isilawuli Sokuthinta / Isilawuli se-Wifi
Izinga lejubane: 3
Ukukhanyisa: Ibhodi lendandatho elingu-1xLED
Hlunga Uhlobo: 1pcs isihlungi
I-Air Outlet: 150mm
Ilayisha i-QTY (20/40 / 40HQ): 192/400/400
Umbala: Mnyama / Mhlophe / Luhlaza / Luhlaza / Igolide / Uphephuli
Imoto: DC 650m3 / h
Hlunga umsebenzi: isihlungi se-HEPA